Ọrụ gị ọ na-arụ ọrụ gị? Olee otú ọtụtụ ndị were n'ọrụ? | Martech Zone
Ọnwa ole na ole gara aga, ị gaghị ejide m na tebụl m ruo elekere 9AM ma ọ bụ karịa. Ọ bụghị na m na-arụ ọrụ mbubreyo… ọ bụ naanị na ọrụ m na-arụ ọrụ m karịa m na-arụ ọrụ ya. Ikekwe, ọ bụ ọrụ kachasị mma mmadụ nwere ike ịchọta ebe a n'etiti etiti ọdịda anyanwụ. Na ụlọ ọrụ ngwanrọ, m ga-agbagha ndị na-enyo enyo ka ha chọta nke ka mma. Abụ m onye njikwa ngwaahịa na otu ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa - ọ bụghị naanị na mpaghara - mana na mba ahụ. Ọsọ ọsọ na-eweta ọtụtụ ihe ịma aka na ya.
M si na Production pụta, ọtụtụ echiche m banyere ọrụ ọgbara ọhụrụ na-alaghachi na isi injinịa m. Emere ngwaahịa, wuo ya, ree ya ma kwado ya. Ọ bụ ezigbo mfe… ruo mgbe ị na-amalite na-eto eto na a ngwa ngwa ọnụego. Kama ịmalite usoro mgbakọ ọhụrụ, ị na-agbakwunye ndị mmadụ na ya. Cheedị banyere nkịta ahụ dị sleded na-adọrọ ụgbọ mmiri ahụ. Tinye nkịta ole na ole na ndị ọzọ na-agba ịnyịnya ma ugbu a, ịchọrọ nnukwu musher na onye nkịta. Tinye otutu, ma, na nkịta amaghi uzo ozo ha ga-esi bulie ma nwekwaafu ebe ozo.
Ihe nzuzu, n’ezie, bụ na uto buru ibu bụ otu n’ime njiri mara azụmaahịa ọganiihu. Anaghị m akụ nnukwu azụmahịa ma ọlị - m na-akụ aka -arụ ọrụ na nnukwu azụmahịa. Site na mgbanwe ikpeazụ m, esi m na ụlọ ọrụ karịrị 200 gaa na ụlọ ọrụ 5.
N’ebe m na-arụ ọrụ, o nwere ike ịbụ na ọrụ dị okpukpu abụọ ma ọ bụ atọ karịa nke mmadụ. Ihe dị iche bụ na ọ dịghị onye na-eche onye ọzọ, ọ bụ ezie na… anyị niile na-agba ọsọ ọsọ ka anyị nwere ike ịkụtu ọrụ ahụ. Ọ dịghị onye na-ewe iwe, ọ dịghị onye na-eti mkpu… anyị niile na-enyere ibe anyị aka ịkwaga ngwaahịa a na ndị ahịa anyị na-aga n'ihu. Offọdụ ndị ahịa anyị buru oke ibu, mana ha na-agbaghara kpamkpam ma ọ bụrụhaala na anyị na ha na-ekwukọrịta okwu ma mee ka ha mata ọganihu anyị.
ikpeazụ izu M arụnyere sistemụ PBX, netwọkụ, netwọkụ ikuku, haziri akwụkwọ akụkọ mbụ anyị, zipụ mgbasa ozi mbụ anyị, dee ihe achọrọ maka ọtụtụ nkwalite na sistemụ anyị maka ndị mmepe abụọ, rụrụ ọrụ iji mee ka anyị wepuo AOL Postmasters, kwaga. Ọfịs ahụ site na nke ochie anyị gaa ebe ọhụrụ, nyere aka mejuputa ndị ahịa ọhụrụ ole na ole, ma na-echekwa oge niile ụlọ ọrụ ekwentị nsogbu.
Nke ahụ nwere ike karịa karịa m nwetara n'afọ gara aga na nnukwu ụlọ ọrụ! Isi okwu m ebe a abụghị ịkụ ụlọ ọrụ m rụụrụ ọrụ - m ka bụ onye ahịa ma na-atụ aro ka ha bụrụ ndị kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ, enweghị nke ọ bụla. Isi okwu m bụ iji mee ka a mata eziokwu ahụ bụ na obere otu ndị nwere onwe ha nwere ike ịga ọsọ ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ọganihu, wepụzie ọrụ ọchịchị ma nye ndị ọrụ gị ike ịga nke ọma.
Otu ihe atụ m gụrụ ọtụtụ afọ gara aga bụ maka WL Gore, ụlọ ọrụ mepụtara Gore-tex.
Gore akpọrọ n'etiti "Bestlọ Ọrụ 100 Kachasị Mma Na-arụ Ọrụ na America," site na magazin FORTUNE, na ọdịbendị anyị bụ ihe nlereanya maka òtù dị iche iche nke oge a na-achọ uto site na ịmepụta ihe okike na ịkwalite ọrụ otu.
Ndị isi na Gore hụrụ na-eto eto ebe karịrị ọnụ ọgụgụ ụfọdụ ndị ọrụ belatara ihe okike ma belata nrụpụta niile. Kama ịmalite ụlọ ọrụ ahụ, Gore ga-amalite ụlọ ọrụ 'ọhụụ', na-egosipụta usoro ngwaahịa yana usoro nhazi nke ọnọdụ ọ bụla. Ugbu a ha nwere ihe karịrị ndị ọrụ 8,000 na ọnọdụ 45. Ọ bụrụ n'ịme mgbakọ na mwepụ, nke ahụ bụ ihe dị ka ndị ọrụ 177 n'otu ebe - ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ nwere njikwa.
Software taa na-enyefe usoro a. Enweghị mkpa ịnwe otu ndị otu mmepe ga - etolite na onwe ha iji mepụta ngwa dị ukwuu nke na ntugharị na nzuzo na mgbagwoju anya. Kama, SOA na-eme ka ndị obere, ndị kwụụrụ onwe ha. Otu ọ bụla nwere ike ịme ihe ngwọta dị mgbagwoju anya… naanị otu ụzọ bụ otu akụkụ nke ngwa ahụ si agwa ibe ha okwu.
Ndụ dị mma na obere anyị ụlọ ọrụ. Anyị na-enweta ego itinye ego ugbu a (nweere onwe gị kpọtụrụ m ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye ọorụ) na ụlọ ọrụ bụ na-emeghe. Fọdụ nwere ike ghara ikwenye, mana ekwenyeghị m na anyị nwere otu onye asọmpi tozuru oke. Anyị na-kwekọọ na ike na nke kacha mma ngwọta na ụlọ ọrụ vera leveraging email, SMS, Voiceshot, Faksị, Web na naa teknụzụ iji bulie njikọ aka na ịba ụba maka ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ.
Luckily, anyị na-agbada, pụtara, na-akpụ akpụ na ihe ịtụnanya ọsọ. Anyị emeela mmekọrịta na ụlọ ọrụ ndị a na-akwanyere ùgwù nke ọma na ụlọ oriri na ọtaụ Resụ, web, Search na Marketing. Industrylọ ọrụ ahụ bụ nke anyị maka ịnata ma anyị nwere atụmatụ na ndị isi iji nweta ya. Na anyị na-adịghị na-eme atụmatụ na-ego ọ bụla oge adịghị anya.
Taa, m na-arụ ọrụ m - anaghị ahapụ ya ka ọ rụọ ọrụ m. Anọ m n'ọfịs na 8AM ma ana m arụ ọrụ nke ọma 10 ruo 20 awa kwa izu karịa ka m mere otu afọ gara aga. N'ihi na a na m enwete nnukwu ọrụ, obi adị m ụtọ na na-arụpụta ihe. Enwere m olileanya na anyị agaghị enweta ndị ọrụ 177 n'oge ọ bụla oge adịghị anya… belụsọ ma anyị kpebie ịwepụta ọnọdụ ọhụrụ!
Tags: ndị isi ọrụOrganizationUsoro nhaziStructure
Sep 10, 2007 na 9: 52 AM
Akwa isiokwu. Echere m banyere nke a mgbe niile n'ihi na m na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ, mana na oge m na-agba ọsọ obere ntanetị na obere blọgụ. Nchịkwa data bụ ihe m na-eme kwa ụbọchị, mana m hụrụ mmalite n'anya n'ihi na ị na-anụ ụtọ akụkụ ọ bụla nke azụmahịa ahụ.
Sep 10, 2007 na 9: 53 AM
M ka m matara na m botched URL m….